Shiinaha CPL albaab soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Mujiang
Dareenka, midabka iyo iska caabbinta xariiqa dahaadhka CPL iyo albaabka bilaashka ah ee melamine waa isku mid, kaas oo xaliya cilladaha kala duwanaanta midabka weyn iyo iska caabbinta aan xirnayn ee ay keento melamine ee la dhigma qalabka kale. Sidaa darteed, waa sheyga ugu habboon ee albaabka melamine.
2.Fire u adkaysta oo waara
CPL waxay leedahay cufnaan dusha sare ah, iska caabin duug ah oo sarreeya, iska caabin wanaagsan oo gubasho, olol celin, qoyaan-caddeyn, midab la'aan iyo iska caabin xoqan. Marka la barbardhigo qalabka kale ee qurxinta ee suuqa ku yaal, sida rinjiga, filimka PVC, guddiga polymerka, iwm, dusha sare ayaa ka xoq badan oo u olol badan, sidaa darteedna adkeysiga badeecadda ayaa labanlaabaya.
Waxqabadka wanaagsan ee ilaalinta deegaanka
Waa qalab cusub oo heer sare ah oo lagu qurxiyo oo loogu talagalay ilaalinta deegaanka ee suuqa. Badeecada la dhammeeyay ayaa la dhammeeyaa ka dib marka la daboolo ama la riixo. Dusha sare uma baahna in mar kale la rinjiyeeyo, taas oo yaraynaysa waxyeellada ay jidhka u leedahay “formaldehyde”. Waxqabadka ilaalinta deegaanka ayaa ka sarreeya, oo heerka ilaalinta bey'addu wuxuu gaari karaa heerka E0 iyada oo loo marayo tiknoolajiyada sheyga ee "net formaldehyde antibacterial".
Hore: Albaabka Wenqi
Xiga: Daaqad aluminium ah oo jajaban